Magozee - Contes pour le français langue seconde
Magaala Nyiroobii irraa fagooti ijooleen mana dhabiyyin manaan ala jiraata turan. Guyyaa maraa akkuma dhufite kessumessu. Guyyaa ganama tokko ijooleen kun afaa irra rafanii bulan marachu jalqaban. Akka isaaniti hinqorrinee waan garagaraa boobesanii o’ifatu. Magozeen garee ijoole kana kessa namtokko dha. Magozeenis umriidhan isa xiqqa ture.
Yeroo matiin isaa du’u Magozee waggaa shan qofa ture. Magozeenis essumaa isa wajjiiin jirachuf bira dhaqee. Namni kuni garauu mucaa kanaf bayee hindhimamnee. Magozeedhaf nyataa gahaa hinkenninef. Mucichi garu hojii bayee akka hojaatu godhe.
Yeroo Magozee gaafi kasuu essumina isa isa tumaa. Yeroo immo Magozeen gara mana barnoota nandeema jedhe gaafatu, essumini isaa akan jedhe: “Bayee raata’a waan tateef barumsi sif galu hindanda’u.” Wagga sadi booda Magozee mana essuma isa dhisee deeme. Daandi gubba jirachu calqabee.
Jiruun dandii gubba hamaa ture. Ijooleen waan nyaatan argachuuf bayee dhama’aa turan. Ijollen kun yeroo tokko tokko nihidhaamu, nitumaamus. Yeroo dhibaman namni isaan gargaruu hinturre. Gareen kuni kan jiraatu mallaqa kadhaafi meshaale xixinno gurguratuuni. Jireenya isaani irra caala kan hammesse waldhanis gareen kuni garee biraa wajjiin qabudha.
Guyyaa tokko Magozee yeroo qawwaa balfa kessa yeroo ilaalu kitaaba senaa duloomaa tokko argate. Kitaabicha qulqullesse keeshaa isa kessa godhate. Guyyaa sana irra caalqabee kitaabicha banee suraawan adda adda ilaala ture. Kitaabicha akka itti dubbisu hinbeeku ture.
Suuraawan sun wa’ee mucaa paylata ta’uf fedhii qabu akkamit akka guddate agarsiisa. Magazeenis paylata ta’uf yaddan balali’ee. Yeroo tokko tokko akkan mucaa seenaa sanati of ilaala,
Guyyaan bayee qorraa dha yeroo Magazeeen kara gubba dhabate kadhatu. Namni tokko itti kiiqee akan jedheen,” Ashamaa, ani Tomaas jedham. Ani lafa ati waan nyaatu argatutaan hojadha.” Namni kunis karkaan gara mana kelloo kan gubbaan isaa dokiyyee ta’ee it agarsisee.” Bakka mana sana dhaqtee akka nyaata argatu abdiin qaba?” jedhe gafatee. Magazzenis yeroo tokko gara manichaa yeroo biraa immo gara namichaa ilaale. “Akka tasa,” jedhe gara mannicha deeme.
Ji’oota ittiaanan kessatti manadhabeyyni kun Tomaasni walarguu cimsanii qaban. Innis immo namoota wajjiin kessaahu namoota karaa gubbaa jirataniin hasa’u jallata. Senaa namoota dhaggefachu jallata. Tomaas nama amala garii qabuufi nama namaa tufatu mit. Ijoolen tokko tokko gara guyyaa walakaa irrati gara mana kelloo fi doqiyoo sana deemudhan waan nyataan argatan.
Yeroo Tomaas dhufee Magozee bira ta’u Magozeen immo kitaaba dubbisa ture. Tomaas akkan jedhe isa gafate, “Seenaa malii dubsitaa?” “Wa’ee mucaa paylata ta’eeti” jedhene Magozee. Tomaas, “Maqaa isaa enyuu jedhe gaafate?” “Anni himbekku, dubbisu hindanda’u,” jedhe Magozeen.
Yeroo walqunnaman Magozee seenaa mataa isaa Tomaasiti himuu calaqabee. Seenaan isaas wa’ee essuma isaatif akka inni itti mana bahee ilaalchisee ture. Tomaas bayee hindubbannes waan Magozeen godhuu qabuus itti hinmnee. Yeroo tokko tokko manaa nyataa kelloo sanaa kessati hasa’u.
Woggaa kurnaffa Magozee irrati, Tomaas kitaaba seenaa tokko kennef. Kitaabichis wa’ee mucaa badiyya tokko kan guddate taphaata kubba milaa ta’eedha. Tomaasis seenaa kana yeroo bayee dubbiseef, akkan jedheen, Amma yeroo ati mana barmusaa dhaqixee dubbisufi barressu barrachuu qabdu dha. Mal yaddaa jedhee gafatee?” Tomaasis lafaa ijoolen itti dhaqxee barattu itti ibsee.
Magozeenis wa’ee iddoo hara’a kana fi wa’ee gara mana barnoota deemu ittiyada ture. Yoo wanti essumni isaa jedhe sirri ta’e garuu inni barachuu hodadhabee? Yoo lafa hara’a kanati issa rukutan? Bayee sodaate. “Gara gubba jirachu wayya ta’a jedhe yaade.”
Sodaa isas Tomaasit himee. Yeroo dheera booda Tomaas jiruun lafa hara’a kanati mishaa akka ta’u itti hime.
Haaluma kanan Magozeen lafa hara’a sana dhaqee mana doqiyye sana kessa gale. Namoota lama wajjiin kutaa tokko kessaa walwajjiin jiratan. walmaa galatti ijoolee 10 mana sana kessa gala. Anitee, sisii fi abbaa manaa ishee, saree 3 fi addurre tokko fi ra’ee dullooma taokko mana sana kessa gala.
Magozeen barmusaa calqabee garu barmusi itti cimee. Bayee dubati hafee ture. Yeroo tokko tokko dhisulee yaada. Garuu wa’ee paylata fi taphaata kubbaa milaa yeroo yaddu immo yada isaa jijjira. Mana barmusaa kessaa hinbanee.
Magozeen oddoo kessa ta’ee kitaabaa mana magarisaa irra argatee san dubbisaa. Tomaas dhufee mal godhaa jirta jedhe isa gafate. “Wa’ee mal dubistaa?” “Wa’ee mucaa barsiisaa ta’eti,” jedhe Magozeen. “Maqaan mucaa sani enyuu dha?” jedhe Tomaas. “Maqaan isaa, Magozee,” jedhama.